को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, नेपाल गठन आजको आवश्यकता (अपिल कोईरालासँग अन्तर्वार्ता) - सहकारीखबर
को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब, नेपाल गठन आजको आवश्यकता (अपिल कोईरालासँग अन्तर्वार्ता)
को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब (सीएमसी), कास्की Cmc Kaski २०७५ सालमा स्थापना भएको सहकारीमा कार्यरत व्यवस्थापक एवं कर्मचारीहरुको साझा समाजिक संस्था हो । क्लबको संस्थापक अध्यक्ष पोखरा रोयल साकोसका मुख्य प्रबन्धक मीलन ढकाल हुनुहुन्छ । सहकारीहरुमा कार्यरत व्यवस्थापक एवं कर्मचारीहरुको ज्ञान, शिप, अनुभव, क्षमता विकासको साझा थलोको रुपमा विकास गर्नको लागि क्वालिटी सर्कलको रुपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएको यस क्लबले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । भदौ २५ गते सम्पन्न चौंथो साधारणसभाले कोन सामुदायिक साकोसका महाप्रबन्धक अपिल कोईरालालाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत् चयन गरेको थियो । संस्थापक सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्षमा निर्वाचित कोईरालासँग सहकारीखबरले क्लबलले गर्दै आएको काम, आगामी रणनीति लगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ।
कोपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब (सीएमसी), कास्कीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । सीएमसी, कास्कीको बारेमा केही बताईदिनुस् न ?
सिएमसी कास्कीको स्थापना कालदेखि नै सक्रिय भएको र संस्थापक सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष हुँदै आज अध्यक्ष जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु । यसको लागि सिएमसीमा आबद्ध साथीहरुको विश्वास र भरोसोलाई सम्मान प्रकट गर्दै आगामी दिनमा थप जिम्मेवार पुर्वक अगाडी बढनु पर्ने महशुश गरेको छु । हामी सहकारी हाक्ने प्राविधिक जनशक्ति हौं र यस सिएमसी यस्तै व्यक्तिहरुको समुह वा भनौं साझा मञ्च हो । हामीले हाम्रा असल अभ्यासहरुलाई यस क्लबमा आबद्ध साथीहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्छाै । सिकाई नै हाम्रो मुख्य विषय रहेको छ । नीति, विधि र प्रविधिमा संचालन गर्ने सहजिकरण गर्ने विषय रहेको छ ।
कस्तो सीएमसी, कास्कीको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
हिजोका दिनमा यस क्लबले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरु सहकारी अभियान माझ छर्लङ्ग छ । अबका दिनमा प्रारम्भिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता तथा नेतृत्व विकास गर्ने, सदस्यता विस्तारको कार्य संचालन गर्ने, महिला नेतृत्व तयार गर्ने, १२ महिनामा कम्तिमा १२ वटा सहकारी सम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षणका अवसर प्रदान गर्ने, स्वदेशका उत्कृष्ट संस्थाहरुको भ्रमण कार्यक्रम आयोजना गर्ने र असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान गर्ने रहेको छ । नीति, विधि र प्रविधिमार्फत संस्थाहरु संचालन गर्न सहजिकरण गर्ने । कास्की जिल्लामा सहकारीका प्रशिक्षकहरु कम भएकोले कम्तिमा कास्कीका २० जना व्यवस्थापक साथीहरुलाई सर्टिफाईड प्रशिक्षकको रुपमा तयार गरि कास्की जिल्लामा रहेका सहकारी संस्था र अन्य जिल्लामा पनि प्रशिक्षण प्रदान गरि अभियानलाई अझ मजबुत बनाउने योजनामा रहेको छौं । सायद यति गर्न सकियो भने पनि अभियानमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
सीएमसी कास्कीलाई सहकारीका व्यवस्थापकहरुको साझा संस्था बन्न सफल भएको छ ?
पक्कै पनि । जे जति हामी जोडिएका छौं हामी सबैको एउटै उद्देश्य कास्की लगायत सहकारी अभियान बलियो बनाउने नै हो । हामी बीच असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान हुन्छ । सहकार्य हुन्छ । हामी सबै मिलेर आफना अनुभवहरु शेयर गर्दे अगाडी बढेका छौं भने सम्बन्धहरु अझ प्रगाढ भएका छन् । कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा योगदान गरेका छौं र इतिहासले यस विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । सायद यहि भएर होला यो सिएमसी कास्की हामी सबैको साझा थलोको रुपमा विकास हुँदै गएको छ ।
सहकारीका व्यवस्थापक, कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा क्लबले के कस्ता काम, पहल गर्दै आएको छ?
हामीले हाम्रा असल अभ्यासहरुलाई यस क्लबमा आबद्ध साथीहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्छाै । सिकाई नै हाम्रो मुख्य विषय रहेको छ । नीति, विधि र प्रविधिमा संचालन गर्ने सहजिकरण गर्ने विषय रहेको छ । प्रारम्भिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता तथा नेतृत्व विकास तालिम, बहस, पैरवी आदी का विषयहरुमा केन्द्रित छौं र हालसम्म सोही अनुसारका तालिमहरु प्रदान गरेका छौं ।
सहकारीका व्यवस्थापन र सञ्चालक बीचको मनमुटाउका घटनाहरु पनि सुनिन्छ । कास्कीमा यस्तो घटना छ की छैन?
हाम्रो क्लवको विधानको प्रस्तावनामा नै कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लव कास्की, सदस्यहरुको चाहना र आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउनको लागि प्रवर्तनकारी अभ्यासहरु मार्फत कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत विकास, सुशासनको प्रत्याभुती, व्यवसायिकरण र सबल तथा सुव्यवस्थित सहकारी अभ्यासको लागि सहकारीहरुमा कार्यरत व्यवस्थापक एवं कर्मचारीहरुको ज्ञान, शिप, अनुभव, क्षमता विकासको साझा थलोको रुपमा विकास गर्नको लागि क्वालिटी सर्कलको रुपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने छ भन्ने वाकांशले नै यो यसको ब्याख्या गर्दछ । कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्नु नै हाम्रो मुख्य काम रहेको छ । हामी प्रारम्भिक संस्थाको आन्तरिक छलफल तथा निर्णयहरुमा हस्तक्षेप गर्देनौं र यस विषयमा हामी प्रष्ट छौं । मनमुटाउहरु संस्थाको आन्तरिक विषयहरु हो र सोही प्रारम्भिक संस्थाले आफै ब्यवस्थापन गनुपर्ने विषय हो र कास्कीमा यस्ता घटनाहरु हामी बीच आएका पनि छैन् ।
सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अन्य क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) मा फड्को मार्ने प्रवृती छ । यसमा के भन्नुहुन्छ?
हो, विगतका दिनहरुमा तपाईंले भने जस्तै थियो । साथीहरुको सहकारीलाई प्रशिक्षण थलोको रुपमा प्रयोग गर्ने र पछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने परम्परा थियो । तर, आज कास्कीको हकमा भने यो ज्यादै न्यून छ । संस्थाहरु वित्तीय रुपमा सबल र सक्षम हुँदै गएका छन् र कर्मचारीको स्थायित्वमा पनि बढि केन्द्रित भएका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहकारीमा आउने परम्पराको विकास भएको छ । यसको खुद उदाहरण म आफै नै छु । यो हाम्रा लागि खुसिको कुरा हो ।
हाम्रो चाहना त राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रवन्धकको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रीय विषयगत संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिवार्य रहने गरि हरेक प्रदेशबाट सहभागिता सहित को-अपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब (सिएमसी) नेपालको गठन गर्ने र हरेका जिल्लामा यसको शाखाको रुपमा हुनुपर्छ भन्ने हो । सहकारी अभियान अन्तर्गत मानव संशाधन दक्ष एवं मजबुत बनाउने परिकल्पनामा आज सिएमसी कास्की लागेको छ । यहाँहरु तथा सम्पुर्ण सहकारीकर्मीहरु साथ सहयोग र सहकार्यता अपरिहार्य छ । सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राख्दछु ।